आईओएस .9.1 .१ को लागि जेलब्रेक अब उपलब्ध छ; एप्पल टिभी for को लागि, अर्को हप्ता | म म्याकबाट हुँ
अचम्मको कुरा, यद्यपि यो अत्यधिक प्रत्याशित थियो, चिनियाँ ह्याकि team टोली पang्गुले यसको उपकरणमा अपडेट जारी गरेको छ जुन तपाईंलाई गर्न अनुमति दिन्छ। IOS 9.1 उपकरणहरूमा जेलब्रेक। उपकरण, जुन दुबै म्याक र विन्डोजको लागि उपलब्ध छ, प्रयोगकर्ताहरूलाई उनीहरूको आईप्याड, आईफोन र आईपड "जेलब्रेक" गर्न अनुमति दिन्छ। तर अझै चाखलाग्दो टोलीले गरेको वाचा हो अर्को हप्ता चौथो जेनरेशन एप्पल टिभीको लागि जेलब्रेक रिलीज हुनेछ.
1 IOS 9.1 जलाशय
2 एप्पल टिभी for को लागि जेलभ्रेकमा काम गर्दै
IOS 9.1 जलाशय
तर दुर्भाग्यवस धेरैका लागि त्यहाँ नकारात्मक समाचार पनि छ, र त्यो यो हो कि एप्पलले डिसेम्बरको अन्त्यमा आईओएस .9.1 .१ मा हस्ताक्षर गर्न रोकेको छ, जसको अर्थ यो हो कि जो कोही अझै चलिरहेको छैन iOS 9.1, तपाइँ अब आईओएस को त्यो विशेष संस्करण मा डाउनग्रेड गर्न सक्षम हुनुहुने छैन।
पang्गूले स्वीकार गरे कि बग 9.1 मा बनाउनका लागि प्रयोग गर्दछ जेल यो एप्पल द्वारा आईओएस .9.2 .२ को रिलीजको साथ प्याच गरिएको थियो। अर्को शब्दमा, मैले यस नयाँ अपडेटलाई उपकरणमा जारी गरेर हराउनुपर्ने केही कुरा थिएन, तर म अझै केहि प्रयोगकर्ताहरूसँग दिन सक्दछु जोसँग आईओएस .9.1 .१ छ उनीहरूको यन्त्रहरूमा यसलाई मजा लिने अवसर।
पang्गू टोलीले विशेष गरी जंग हुन लीको कामको सराहना गरेको छ, दक्षिण कोरियाका सुरक्षा विशेषज्ञ लोकिहार्ट उपनाम दिएका, हैकर सर्कलमा परिचित छन्। लीले २०१ P Pwn2Own ह्याकि contest प्रतियोगितामा पहिले नै ठूलो इनाम जितिसकेका थिए।
Pangu उपकरणको संस्करण १.1.3 जुन तपाईंलाई अनुमति दिन्छ iOS 9.1 मा जेलब्रेक पहिले नै बाट डाउनलोड गर्न सकिन्छ Pangu को आधिकारिक साइट.
एप्पल टिभी for को लागि जेलभ्रेकमा काम गर्दै
के अवस्थित छ आईओएस ११..9.1.१ को लागि यो अझै पनि राम्रो समाचार हो, कम्तिमा यस उपकरणको प्रशंसकहरूको लागि, तथापि,aको समाचार एप्पल टिभी for को लागि जेलब्रेक यो धेरै बढी रोचक छ। आफ्नो आधिकारिक ट्विटर खातामा, पंगुले टिप्पणी गरे कि यो अर्को हप्ता TVOS ox।
सायद उसको लागि एप्पल टिभीमा जेलब्रेक तपाइँले एसएसएच पहुँच गर्नुपर्नेछ, तसर्थ यस समयमा कुनै पनि प्रयोगकर्तालाई गर्न को लागी यो सजिलो हुनेछैन कि जस्तो यो आईओएस संस्करण हो। यद्यपि यो अझै राम्रो समाचार हो किनकि यसले नयाँ परिमार्जन र सुधारका लागि ढोका खोल्दछ Apple TV.
एप्पल टिभीको तेस्रो जेनरेशनले कहिले कुनै जेलब्रेक प्राप्त गरेको छैन, त्यसैले नयाँ एप्पल टिभी एक वास्तविकता हुनुपर्ने ठूलो मांग छ।
ज्ञात लाभ र जेलब्रेक को नुकसान… के तपाइँ यसलाई नयाँ नयाँ एप्पल टिभीमा लागू गर्नुहुन्छ जब यो उपलब्ध हुन्छ?
लेखको पूर्ण मार्ग: म म्याकबाट हुँ » एप्पल » हाम्रो बारेमा » आईओएस .9.1 .१ को लागि जेलब्रेक अब उपलब्ध छ; एप्पल टिभी for को लागि, अर्को हप्ता